Yakachipa Akawanda Hoppers Imwe Weigh Static Organic & Compound Fertilizer Batching Machine Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Static Fertilizer Batching Machine?
Kunofambira mberi otomatiki batching system otomatiki batching michina iyo inogona kuenda kunoshanda neBB fetiraiza michina, organic fetiraiza michina, mukomboni fetiraiza michina uye mukomboni fetiraiza michina, uye inogona kupedzisa otomatiki chiyero maererano nezvinodiwa nevatengi.
Mune yakazara fetiraiza yekugadzira mutsara, inofanira kugadzirwa uye kushandiswa kutora uye batch marudzi ese ezvigadzirwa. Uye kunyanya ichave yakagadzirirwa mune iyoorganic fetiraiza yekugadzira mutsara kana NPK remubatanidzwa fetiraiza yekugadzira mutsara uye zvimwe zvakateedzana fetiraiza yekugadzira chirimwa. Kazhinji, Static otomatiki batching michina anoshandiswa echokwadi kuyerwa uye kusanganisa akasiyana mbishi zvigadzirwa, kutsiva manyore uye vhoriyamu kuyerwa.
Zvimiro zveStatic Fertilizer Batching Machine
Iyo static otomatiki batching muchina ine hunhu hweyakanyanya kuyerwa kurongeka, kukurumidza kugovera uye yakakwira otomatiki degree, inova imwe yezvikamu zvikuru zveiyo yakazara fotereza yekugadzira michina.
(1) Yakazara otomatiki batching uye dosing system
(2) Nzvimbo dzakasiyana kubva pamatani mashanu kusvika zana paawa
(3) Iyo Otomatiki Batching Machine inogona kushanda nemhando nhatu kusvika kugumi yezvinhu zvakagadzirwa
(4) Yakakwira batching chaiyo
(6) Yakasarudzika anti-inomhanya bhandi
(7) Iyo batching system inopedzisa izvo zvinoshandiswa zvechinhu chimwe nechimwe zvinoenderana nemamiriro acho
Static Fertilizer Batching Machine Vhidhiyo Ratidza
Static Fertilizer Batching Machine Model Sarudzo
Iyo yekudyisa kugona ndeye 0.05m / h-1000m / h, uye yekuendesa bhandi upamhi ndeye 500mm-1800mm. Nharaunda yepakati peiyo roller ndeye 1000mm-8000mm. IzviKwakamira Fetiraiza Batching Machine inogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
Pashure: Organic fetiraiza Round makorari Machine
Zvadaro: Yakarerekera Sieving Solid-mvura Separator